Wararkii ugu dambeeyey ee furitaanka shirka Muqdisho - Caasimada Online
Home Warar Wararkii ugu dambeeyey ee furitaanka shirka Muqdisho
Wararkii ugu dambeeyey ee furitaanka shirka Muqdisho
Muqdisho (Caasimada Online) – Magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya waxaa maanta si rasmi ah uga furmayo shirka golaha wada-tashiga qaran ee u dhexeeya dowladda federaalka, dowlad goboleedyada ka jira dalka iyo sidoo kale gobolka Banaadir.
Qaban-qaabadii ugu dambeysay ayaa haatan ka socota Muqdisho, gaar ahaan Teendhada Afisyoone, iyadoo caasimada ay haatan ku sugan yihiin inta badan hoggaamiyeyaasha maamullada, waxaana kaliya la sugayaa Saciid Deni oo ku soo wajahan Muqdisho.
Intiisa badan waxaa shirkan diirada lagu saari doonaa arrimaha doorashooyinka ee 2021-ka, waxaana guddoominayo ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble.
Sida ay ogaatay Caasimada Online, madaxda ayaa si gaar ah shirkooda maanta ku lafo-guri doona Afar qoddob oo muhiim ah, kuwaasi oo kala ah:-
1. Diyaar garowga doorashooyinka golaha shacabka
2. Diyaarinta habraacyada doorashooyinka
3. Raadinta dhaqaalaha ku baxaya doorashooyinka
4. Dhameystirka doorashada Aqalka Sare
Ammaanka ayaa sidoo kale aad loo adkeeyey, waxaana nawaaxiga hoolka uu shirka ka dhacaya ku sugan ciidamo Boolis ah iyo sidoo kale kuwa Midowga Afrika ee AMISOM.
Shirkan oo uu dib u dhac ku yimid furitaankiisa ayaa ku soo aaday, xilli xasaasi ah oo la guda-galay doorashooyinka dalka, gaar ahaan tan Golaha Aqalka Sare ee Soomaaliya.
Doorashooyinka ka dhacaya dalka ayaa soo maray marxalado kala duwan, waxaana is jiid jiid dheer, kadib heshiis looga gaaray magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya.